Isikhangeli seOpera ngoku sixhasa ii-processor M1 | Ndisuka mac
Abafana baseOpera babhengeze nje ukuba isikhangeli sabo ekugqibeleni iyahambelana ngokwendalo neeprosesa zeApple M1. Nangona kuyinyani ukuba kude kube ngoku inokusetyenziswa kusetyenziswa i-Rosetta 2 enomzami wokulungisa, ngale nguqulo intsha amava omsebenzisi akhawuleza kakhulu kwaye asebenza ngokukuko.
Ngokuka-Opera, isicelo siyavula ngoku Amaxesha ali-2 ngokukhawuleza kunenguqulo yeeprosesa ze-Intel. Ngelixa kuyinyani ukuba lo mvelisi uthathe elona thuba lide ukumilisela uguqulelo oluhambelana neeprosesa ezintsha ze-Apple, kubonakala ngathi bekukho isizathu.
Njengokuhlaziya abakhuphile kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, abafana baseOpera abakhange balungelelanise isicelo ukuze basebenze kunye neeprosesa ze-ARM, kodwa, kongeze imisebenzi emitsha. Kwimeko yenguqulo ye-macOS, bathi abasebenzisi banokumisela iindlela ezimfutshane zekhibhodi ukongeza umsebenzi wokuhamba. Ukongeza, ifakwe kumdlali wemidiya kunye nekhredithi ye-cryptocurrency.
I-Opera sisindululo esinomdla sokusijonga njengoko sinikezela I-VPN yasimahla, ibhloko yecookie yokulandela umkhondo, amaqhosha ngokuthe ngqo ekwabelwana ngawo ngothungelwano lwentlalo ebesilungiselela ngaphambili (ukuhamba) Ngokukhutshwa kwale nguqulo yeOpera yeeprosesa ze-M1 zika-Apple, esi iba sisikhangeli esitsha sokwenza njalo.
El Isikhangeli sokuqala eyazisa ngenkxaso yemveli yeeprosesa ze-M1 (kungabalwa iSafari) chrome. Kungekudala emva koko, yayisisiseko seMozilla esakhupha ingxelo yo Firefox iyahambelana nezi processor. Ukukhuphela le nguqulo intsha, ungayenza ngqo kwi iphepha lewebhu.
Ukusukela ngo-2016 inkampani yaseNorway yathengiselwa Umanyano lwabatyali mali baseTshayina kwizigidi ezingama-600 zeerandi. Ngamnye wenu ufumana izigqibo zakhe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iinkqubo zeMac » Isikhangeli seOpera ngoku sixhasa i-M1 processor